Ngisho nabafana abakhulu bayakhohlwa ukusetshenziswa! | Martech Zone
ULwesibili, April 17, 2007 Douglas Karr
Bengifuna ukubhala inothi emfushane kwezinye izingqinamba zokusetshenziswa ezikhungathekisayo engizibonile ngezicelo ezimbalwa.
Ngokuvumelana ne Wikipedia, ekuxhumaneni kwabantu nekhompyutha nakwisayensi yamakhompiyutha, ukusetshenziswa ngokujwayelekile kubhekisa ebuhleni nasekucaceni lapho ukuxhumana okwenziwe nohlelo lwekhompyutha noma iwebsite yakhelwe khona.
Eyokuqala engizoyinikeza empeleni iyinkinga yokusebenziseka nge- Ikhasi lasekhaya le-Google. Uma ungeza ingxenye ye-Google Reader ekhasini lasekhaya le-Google, isebenza kahle impela. Nakhu; noma kunjalo, inkinga eyodwa ebabazekayo: isixhumanisi esithi 'maka konke kufundwe' sitholakala ngqo ngezansi kwesixhumanisi esizovulwa -Google Reader.
Izikhathi ezimbalwa manje, ngichofoze isixhumanisi esingalungile futhi konke okuphakelayo kwami ​​ngokuzenzekelayo kuye esimweni sokufundwe kwabo. Lokhu kungukusebenziseka okubi. Ngingakhuthaza iGoogle ukuthi isuse lesi sixhumanisi kude nakwezinye izixhumanisi.
Isibonelo sesibili IMicrosoft Entourage, lapho inkinobho Susa ye-imeyili iseduze kwenkinobho ye-Junk Email. IMicrosoft Entourage ifana ne-Outlook ye-OSX, kepha ayinayo inketho yokuhambisa izinkinobho nxazonke. Ngenxa yalokho, ngingeze ngephutha ama-imeyili afanele kufolda yami ye-Junk Email. Ukulungisa lokho, kufanele ngihlehlise noma yimuphi umthetho we-Junk Email, ngithole i-imeyili kufolda yami ye-Junk Email, bese ngiyibuyisela ku-Inbox yami. Hlela!
Ngingomunye walabo bafana abathanda ukuhlela futhi bahlukanise yonke into ngaphakathi kohlelo lokusebenza. Ngikholwa ukuthi zombili lezi yizibonelo lapho ukuhlela izinto kunengqondo ngokunengqondo - kepha hhayi ngokwenqubo. Kubalulekile ukuqonda ukuthi abasebenzisi basebenzisa kanjani uhlelo lwakho lokusebenza ukuze ukwazi ukumisa amaphutha angaqondakali ngokuhlelwa kwezinto ezingezinhle.
Qhathanisa lokhu neWordPress, owenza umsebenzi omuhle wokuhlukanisa izinto ezingahlangene. Qaphela ifayili le- Gcina bese uqhubeka nokuhlela futhi Londoloza izinkinobho ngaphezulu (okuyisisekelo sefomu lokuthunyelwe) kanye ne Susa lokhu Okuthunyelwe inkinobho ezansi impela ohlangothini lwesobunxele… kude, kude kakhulu komunye nomunye.
Umsebenzi omuhle, WordPress!
Ingabe unezibonelo zezinkinga zokusebenziseka ezimbi ngezinhlelo ozisebenzisayo?
Ngenisa okuphakelayo kwakho kwe-Google Reader kuzintandokazi zeTechnorati
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-12: 37 AM
iqiniso elincane elaziwayo: Ngiyisizathu sokuthi inkinobho yokususa iba bomvu.
ngoba angazi ukuthi ngiwufunde kanjani umehluko phakathi kokususa nokonga 🙁
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-3: i-14 PM
Noma mpunga omnyama kulabo bantu abasebenza imibala. 😉
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-9: 52 AM
Empeleni, uma usebenzisa i-WordPress 'insiza yokubamba mahhala nge-IE7 futhi uzama ukunweba isigaba se- "Optional Excerpt", ayikhulisi ngokuphelele. Lokhu kungaba yi-glitch ngaphezu kwenkinga yokusebenzisa, kepha ungalokothi ube kuncane, kungacasula.
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-10: 57 AM
Noma yini ku-myspace.
Wes, lowo ungenze ngakhwehlela futhi ngahleka kakhulu. Uqinisile impela!